ExpressJet Airlines kuva mukurumbira wepasi rose Embraer ERJ145
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » ExpressJet Airlines kuva mukurumbira wepasi rose Embraer ERJ145
Airlines • nhandare yendege • Brazil Kupwanya Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
ExpressJet Airlines, mutakuri weUnited Express, yazivisa nhasi ichawedzera ndege makumi matatu neshanu Embraer ERJ36 kune yayo United Express zvikepe, izvo zvichaita ExpressJet mutyairi wepasirese wepasi-makumi mashanu Embraer ERJ145 ndege. Iwo mapato ari kushandira kukwirisa kwenguva refu kweiyo ExpressJet Capacity Kutenga Chibvumirano.
Chibvumirano ichi chinosanganisira:
Kuwedzeredzwa kwe36 Embraer ERJ145 ndege pamusoro pemwedzi gumi nembiri inotevera, inokwana kupfuura 12 ERJ125s mune zvikepe.
Kuwedzeredzwa kwegore-yakawanda kweCapacity Kutenga Chibvumirano (CPA) neUnited Airlines.
Mari yakakosha mukuzorodza kwemukati izere nendege yeEJJ145 ine mapaneru matsva, zvigaro zvitsva, mwenje weLED, uye indasitiri-inotungamira yemhando yekuvaraidza yemidziyo.
“Takaita chitsidzo chenguva refu kuna Embraer ERJ145 uye takagadzira kabhodhi yakazara, chigaro, uye kuvandudza varaidzo kuti ibudise ruzivo rwevatengi, "akadaro Sarah Murphy, Mutevedzeri Wemutungamiri weUnited Express. "Tine chivimbo chekuti vatinoshanda navo paExpressJet vanogona kuita chiratidzo ichocho."
“Kuvimba kweUnited ExpressJet chiratidzo chekuzvipira uye kuchinjika kwevashandi ve ExpressJet, "akadaro Subodh Karnik, Sachigaro uye CEO we ExpressJet Airlines. "Kukudza zvikepe zvedu nekuvandudza ma ERJ145s kunosanganisira chiono chedu: 'Kuva mutakuri weUnited Express anonyatsonzwisisa nekuzadzisa zvido zveUnited Airlines.'"
Sechikamu chekuzvipira kwenguva refu kuEmbraer ERJ145 uye kukura kwezvikepe, ExpressJet ichazivisa kuwedzerwa kune vashandi vayo uye zvivakwa kuUnited hubs, kusanganisira Denver, mumavhiki anotevera. Sechikamu chechibvumirano, ExpressJet ichatepfenyurawo yavo diki ndege dzeE175 ndege kuti ikurumidze kukura uye ive inoshanda imwe-ngarava yendege.